သူငယ်ချင်းများပြန်လည်ဆုံဆည်းရန်။ [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > သတင်းနှင့် ဆုံဆည်းရာ > TU/Institutes > နည်းပညာတက္ကသိုလ် ( ပြည် ) > သူငယ်ချင်းများပြန်လည်ဆုံဆည်းရန်။
View Full Version : သူငယ်ချင်းများပြန်လည်ဆုံဆည်းရန်။
ကျွန်တော်တို့ပြည်ကျောင်းက ကျောင်းသားတွေက ကျောင်းမှာဆို အရမ်းစည်းလုံးကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျောင်းပြီးသွားကြတော့ အားလုံး ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ကိုယ် ရှုပ်နေကျတော့ မတွေ့ဖြစ်ကြဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဒိနေရာလေးမှာ လာဆုံ ကြပြိး တစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက် အတွေ့အကြုံဖလှယ်ရင်း
ကျောင်းတုန်းက အ ကြောင်းတွေပြောကြရင်ကောင်းမလားလို့ပါ။
မြောက်ကြွနဲ့ရောက်သွားတာ။အဲဒီမှာ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုကြည့် ပြီး ပြုံးစိစိနဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်ကြည့်တော့မှ
(ခန္ဓာကိုယ်) လားလား ကျွန်တော့်ပုဆိုးကတင်ပါးနေရာမှာ နှစ်တောင်လောက် ပြဲနေတာ။ကျွန်တော်ဖြစ်ရှက်လိုက်တာဗျာ။ရှက်လွန်းလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူး
Nice to hear u!!!
I alsoagrduate from Pyay Techanical University as BE (civil)
I very happy to see ur letter and I feel that I so miss my school.
I now working at singapore as site engineer.
May I hope to see ur letters about our PTU.
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်က 2008 မှာ ကျောင်း ပြီး တာပါ။ကျောင်းကြီး က တော့ အရင်အတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့
ရဲ့လက်ခုပ်ပင်ကြီး က လည်း အရင်အတိုင်းပါပဲ။ပြောင်းလဲတာကတော့ ကျောင်းဆောင်တွေ ထပ် ဆောက်တယ်။ကျောင်းထဲကိုဆိုင်ကယ်စီးမ၀င်ရဘူး။ကျောင်းကန်တင်းမှာ သီချင်းမဖွင့်ရဘူး။နောက်ပြီးတော့ ...............သိချင်ရင်ဝယ်ဖတ်...တစ်စောင် ၅၀၀
သန့်ဇင်ကိုတော့သိပ်မယုံနဲ့ဗျ ဒီကောင်ကမလွယ်ဘူးနော် အထူးသဖြင့်ကောင်မလေးတွေသတိထားကြ သူငယ်ချင်းတွေဆုံစေချင်တယ်ဆိုလို့ link လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ် အရင်တုန်းကဘုရားကြီးနားကကျောင်းကိုမှတ်မိသေးရဲ့လား ဆိုင်းဘုတ်ကအစမပြောင်းသေးတဲ့အချိန်ကပေါ့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အဲဒီကျောင်းမှာ 2နှစ်ပဲတက်ခဲ့ရတယ် သူငယ်ချင်းတွေ တပျော်တစ်ပါးတွေ့ကြတာပေါ့ ကျွန်တော်လည်းဒီဆိုဒ်လေးရတာမကြာသေးဘူးဗျ သန့်ဇင်ကရေးချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ရှာပေးလိုက်တာ အားလုံးပဲသူငယ်ချင်းတွေပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ ဆရာတွေလည်းပါတယ်ဗျ ကျွန်တော်တောင်သေချာမကြည့်ရသေးဘူးဗျ ဒီလင့်လေးကိုသွားကြည့်ကြပေါ့နော်
http://pyaygti.ning.com/ ကဲဒီမှာ link လိုက်ကြပေတော့ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးပြန်လည်ဆုံစည်းနိုင်ပါစေ singin တော့လုပ်နော် ကျွန်တော်ကတော့ levoman နဲ့ဝင်ထားတယ်ဗျ
mingalarpar friends, ကျွန်တော်က 2008 မှာ ptu ကနေ EP major နဲ.ကျောင်းပြီးတာပါ
http://pyaytechnologyuniversity.ning.com ပြည်နည်းပညာ social လေးပါ ။